I-China i-RF ye-microwave PCB eneFlash Gold Surface egqiba abenzi beebhodi zesekethe ezikumgangatho ophezulu kunye nabathengisi | PhiliFast
I-RF ye-microwave PCB eneFlash Gold Surface egqiba iibhodi zesekethe ezikumgangatho ophezulu
Izinto ezisisiseko: URogers4350 Umphezulu Gqiba: ENIG
Ubungakanani bePCB: 80*80mm Isilikhi: mhlophe
Umgangatho ophezulu weMveliso yePCB ekhawulezayo
I-PCB ye-PHILIFAST yenze imimandla eyahlukeneyo ye-elektroniki ye-PCB / ye-PCBA yokuvelisa kunikezelo lwamandla. inkqubo ye-smart home, izixhobo zombane zabathengi, izixhobo ze-elektroniki zezithuthi, unxibelelwano, ulawulo lweshishini, ukukhokelwa, unyango.
Umahluko weRogers PCB Senzelwe uMthengi wethu:
1, Izinto esinazo kwisitokhwe:
1, 5G Microwave RF ibhodi yokuhamba rhoqo
I-2, iBhodi yeRF HIGH-SPEED HIGH-RREQUENCY Board
3, Ukuhamba rhoqo kwe-5G ye-Antenna PCB
4, iBhodi yeeSekethe zoNxibelelwano lweMicrowave
5, iBhodi yoLawulo lweSekethe yeRF
6, iBhodi yokuSahlulaMandla
Uxinano oluphezulu lwee-PCB ezininzi, iiprototypes ezikhethekileyo zePCB, uhlobo lwePCB kunye nenkonzo yebandla lePCB. Iimveliso zethu zibandakanyiwe:
* IiPCB zeHDI
* Ii-PCB zefoyile enzima
* Ii-PCB zee-High-Frequency * ze-PCB zendibano * Uvavanyo lomsebenzi emva kwendibano ye-PCB * Ukwenza istensile
1, Sisebenzisa iRogers, iTaikangli, iYalong, iWangling kunye nezinye izinto zokwenza uphawu ukwenza iibhodi ezihamba rhoqo, kwaye sixhotyiswe ngabasiki bezinto ezikhethekileyo zokunciphisa i-burrs.
2, Sebenzisa izixhobo zokulungisa iplasma ukwenza i-via kunye nomphezulu ukwandisa ukubambelela kumngxunya we-PTH umngxunya kunye ne-inki ye-mask.
I-3, Inkqubo yokuvelisa ngokuchanekileyo ilawula ubukhulu be-dielectric, ubukhulu bezobhedu, ububanzi bomgca kunye nokushiya umgca, kunye ne-solder mask ink-thickness ukuqinisekisa ukuba ixabiso le-solder mask liphakathi kwendlela yokunyamezela.
1, Uku-odola okuncinci, Sihlala sisebenzisa ukuhambisa ngenqanawa ukuqinisekisa ukuhanjiswa kwangexesha.njengeFedEx, iDHL, iUPS, i-TNT, i-EMS, imigca yabucala, njl. Yonke into yokuhambisa iya kuba ngexesha ngaphandle kokulibaziseka okukhulu.
2, Ukuvelisa ubuninzi, Sihlala sisebenzisa ukuhambisa uLwandle ukugcina iindleko zakho.
3, Kwakhona, ukuba unokutyumba owakho umhambisi phambili, singathumela iimpahla kumphathi wakho.
Q1: Yeyiphi inkonzo onayo?
A: Sibonelela nge-FR4 high-density PCB, ibhodi yesekethe emininzi kunye ne-MCPCB aluminium substrate, njl.
Q2: Uthini ubungakanani beodolo yakho (MOQ)?
A: Ngokumalunga ne-MOQ, asinasicelo malunga nayo. Iifayile ze-Even1 zilungile kuthi.
Q3: Ngaba ubonelela ngenkonzo yokuhambisa ngokukhawuleza?
A: Ewe, sinokubonelela ngenkonzo yokuhambisa ngokukhawuleza ngokweemfuno zakho.
Q4: Yintoni efunekayo kwi-PCB kunye ne-PCBA locaphulo?
A: Kwi-PCB: Ubungakanani, ifayile yeGerber kunye neemfuno zobuchwephesha (izinto, ubungakanani, unyango lokugqiba umphezulu, ubukhulu bobhedu, ubukhulu bebhodi).
Egqithileyo Flexible pcb 6 Ulwaleko fpc Flexible-ziqinile PCB ukwenziwa Flex PCB Cable (FPC) ziqinile-Flexible ibandla pcba
Okulandelayo: Turnkey PCB Assembly Electronic Ishicilelwe Pcb Circuit Board yoMvelisi In China PCBA iibhodi
Rogers Pcb Shenzhen Pcb yoMvelisi Shenzhen M ...
Multi-Layer Blue Solder Vuvu Circuit IBhodi Indoda ...
inkonzo pcba ibandla elektroniki umenzi ...
Quality High 4L FPC Flex PCB IBhodi Flexible Pri ...